मलेसियामा किन हराउँदै छन् नेपाली युवा-युवती ? हेर्नुस् यस्तो छ कारण ! - Samaj Patra
बिज्ञान तथा प्रविधि
साहित्य / बिचार
मलेसियामा किन हराउँदै छन् नेपाली युवा-युवती ? हेर्नुस् यस्तो छ कारण !
बैशाख २८, २०७९ बैशाख २८, २०७९ - by Samaj Patra
मलेशिया नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मध्ये एक हो । रोजगारीकै लागी लाखौँ नेपाली मलेशिया आउने जाने गरिरहन्छन् । रोजगारीको लागी मलेसिया पुगेका केहि नेपाली भने परिवारको सम्पर्कबाट टाढा हुने गरेको विभिन्न घ”टना क्रम र अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुद्दामा जे”ल पर्नु, पे्रम सम्बन्ध, पारिवारिक मन”मुटा”व, रोजगारीकै क्रममा विदेशमा मृ”त्यु, दु”र्घटनामा पर्नु, घरेलु कामदारको हकमा रोजगारदाताले ब”न्दी बनाउनु, व्यक्तिगत चाहनालगायत कारणबाट विदेशिएका नेपाली परिवारको सम्पर्कमा नआएका बुझिएको छ ।
आप्रवासी कामदारको हक, अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) मा पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा परेको उ”जुरीअनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा पुगेकामध्ये २०० नेपाली परिवारको सम्पर्क बाहिर छन् ।
यो त उजुरी परेकाको मात्र संख्या हो । अन्य उजुरी नपरेका धेरै नेपालीका परिवार अझै आफ्ना आफन्त कुरेर बसिरहेका छन् ।
मुस्लिम देश भएर पनि मलेशियामा कानुन निकै खुकुलो छ । यहि खुकुलो कानुनको फाईदा उठाएर मलेशिया पुगेका केहि नेपालीहरु मोजमज्जा र रस-रमाईलोमा भुल्ने गरेका छन् ।
विशेष गरि विदेशी कामदारहरु लक्षित गरेर संचालन गरिएका होटल, दोहोरी, क्लब, मिनी क्यासिनो, यौ”न अ”ड्डा लगायतका कारण धेरै नेपाली युवाहरु कुलतको दलदलमा फसिरहेका छन् । मलेशियाको केएल, केलांग, पेनांग, पेराक, जोहोरबारु लगायतका शहरहरुमा नेपाली श्रमिकहरुलाई नै लक्षित गरेर हजारौं होटल रेष्टुराँ र मसाज सेन्टर संचालन गरिएका छन् ।
यि होटल रेष्टुराँ तथा क्लबहरुमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नकै लागी महिला कामदारहरु राखिएका छन् । परिवार र श्रीमती छोडेर जवानीमा विदेश भाशिनेहरु यिनै महिला कामदार संग जिस्कने र रमाईलो गर्न पाउने आसमा ति होटल रेष्टुरा पुग्नेगरेका छन् । नेपालीहरु द्वारानै संचालित यस्ता होटल रेष्टुराँहरुमा युवाहरुलाई आकर्षित गर्नको लागी नेपाली युवतीहरु नै प्रयोग हुनेगरेको पाईएको छ। वेटरका रुपमा कार्यरत यस्ता युवतीहरु कमाई बढाउन यौ”न धन्दामा संलग्न हुनेगरेको पाईएको छ ।
विशेष गरेर नाच्नको लागी भन्दै मलेशिया पुर्याईएका र कम्पनी छोडेर ई”लिगल भएका नेपाली युवतीहरु यस्ता ध”न्दामा लाग्ने गरेका छन् । आइतबार र छुट्टिको दिन प्रायः नेपाली केटा र केटीले त्यहाँका लजहरु भरिने गरेको छ ! , ‘केलागं, कोताराया, पेनांग, जोहर, बतुपाहक जस्ता ठाउँ यौ”न व्यापारी केन्द्र हुन् । यहाँसम्मकी नेपाली केही होटलहरुले पनि केलागं, कोताराया, पेनांग, जोहर, बतुपाहक लगायत ठाउँहरुमा यौ”न व्यवसाय चलाइएको पाइन्छ ।
अर्को कारण ईन्डोनेशियन युवतीको प्रेम
नेपालीहरु रोजगारीको लागी मलेशिया गए जस्तै रोजगारीकै लागी मलेशुया आउने ईन्डोनेशियनहरुको संख्या ठुलो छ
विशेष गरि हल्का सामाग उत्पादन हुने कम्पनीहरुमा यस्ता ईन्डोनेशियन युवतीहरु कार्यरत छन् !
तिनै ईन्डोनेशियन युवतीहरु संग काम गर्ने नेपाली युवाहरु प्रेमको दलदलमा फसेर घर बिर्सनेगरेको मलेशियाकै शाहालाममा रहेको पानासोनिक कम्पनीमा कार्यरत मकवानपुरका पूर्ण गोलेले बताए । आफु संगै काम गर्ने धेरै नेपाली युवाहरु ईन्डोनेशियन युवतीहरु संग प्रेममा परेर लिभिंग टुगेदरमा बसिरहेको उनको भनाई छ । यसरी बस्न थालेपछि कमाएको तलब उतै सकिने र पैसा पठाउन नसकेपछि घरमा सम्पर्क टुट्ने गरेको छ ।
केहि नेपालीहरु यिनै ईन्डोनेशियन युवती संगको प्रेमको द्व;न्दको कारण पनि बे;पता हुनेगरेका छन् । मलेशियामा रहेका भारतीय मुलका मलेशियन युवाहरु र नेपाली युवाहरुको रोजाई जुbद्धा बेलाबखत नेपालीहरुले ज्या:न गुमाउने र बेपत्ता हुने क्रम पनि बढेको छ। आफुले मनपराएका युवतीलाई नेपाली युवाले मनपराएको वा जिस्काएको थाहा पाएमा भारतीय मुलका मलेशियन ( तामिल) हरुले गौडा ढुकेर आbक्रमण गर्ने गरेको घटना मलेशियन कम्पनीहरुमा सामान्य जस्तै हो ।
कस्तो अनौठौं छाता, मूल्य डेढ लाख !
जेष्ठ ९, २०७९ जेष्ठ ९, २०७९
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, जेठ९ गते सोमबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
जेष्ठ ८, २०७९ जेष्ठ ८, २०७९
अबको एक वर्ष भन्दा बढी यी ३ राशिलाई हुनेछ अत्यन्त शुभ, हुनेछ लाभ नै लाभ !
Previous Article बिदेशबाट नेपाल आउँदा नबोक्नुस सुन, एअरपोर्टमा नयाँ प्रबिधि जडान
Next Article शुन्य लागतमा मलेशिया रोजगार : बेसिक RM 1500 + OT
जजिराको विमान भैरहवामा अवतरणको क्रममा चरासँग ठोकियो
जेष्ठ ९, २०७९ जेष्ठ ९, २०७९ - by Samaj Patra
जजिराको विमान भैरहवामा अवतरणको क्रममा चरासँग ठोकियो जजिरा एयरको विमान गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा चरासँग ठोकिएको छ । सोमबार बिहान २ बजे कुवेतबाट आएको विमान विमानस्थल परिसरमा चरासँग ठोकिएको …
अब यस्ता व्यक्तिहरु मात्र भिजिट भिसामा खाडी र मलेसिया जान पाउने (नयाँ सुचना सहित)
यस कारण पनि अब जानू पर्दैन काठमाडौं..
मलेसियामा फ्रि भिषा फ्रि टिकेट : ३७७ जना नेपालीको माग
मलेसियामा कामदार पठाउँदाको हरहिसाब माग्यो, के होला अब ?
यौ-न स-म्पर्कपछि तुरुन्तै पिसाब फेर्न किन आवश्यक छ ? महिलाहरूले जान्नै पर्ने बिशेष कुरा
फाल्गुन १७, २०७८ फाल्गुन १७, २०७८ - by Samaj Patra
एजेन्सी । आफ्नो पार्टनरसँग शा’रीरिक स’म्बन्ध निर्माण गर्दा आफ्नो घनिष्ठ सरसफाइको ख्याल गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईंले घनिष्ठ सरसफाइमा ध्यान दिनुभएन भने, तपाईंले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। …
जब मेरा श्रीमानले मलाई छोरीको शिक्षकसँग फेला पारे ….
पुस ३०, २०७८ पुस ३०, २०७८
काठमाडौंका पुरुष बे’श्याको कमाई : एकपटक सेवा गरेको १० देखि २५ हजारसम्म
प्रेममा पागल दाजु बहिनीले गरे सबै सीमा तोडेर बिहे, विवाहअघि नै गर्भवती भएको रहस्य खुलेपछी….
श्रीमती साट्ने ७ जना धनाढ्यहरु पक्राउ, गिरोहमा १ हजारभन्दा धेरै सक्रिय रहेको खुलासा